Wasiirka amniga DFS oo sheegay in ay qabteen kooxo looga shaki qabo Al-Shabaab oo doonayay in ay ka dhoofaan garoomada dalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka amniga DFS oo sheegay in ay qabteen kooxo looga shaki qabo Al-Shabaab oo doonayay in ay ka dhoofaan garoomada dalka
October 31, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka amniga dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdirisaaq Cumar Maxamed. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa sheegtay in ay qabatay shabakad looga shaki qabo Al-Shabaab kuwaasoo isku dayay in ay ka dhoofaan garoomada dalka.
Wasiirka amniga dowlada federaalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in 20 qof oo looga shaki qabo Al-Shabaab ay ku xireen garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho.
Cabdirisaaq ayaa sidoo kale xusay in haayadaha amaanka ee qaybaha kala duwan ee dalka ay qabteen kooxo looga shaki qabo Al-Shabaab kuwaasoo rabay in ka duulaan garoomadaas.
Amaanka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa la adkeeyay iyadoo ay soo food leeyihiin doorashooyinka dalka oo la filayo in ay dhacaan bisha November oo beri dhalan doonta.
November 21, 2016 Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in 112 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 43 aqalka sare ah lasoo doortay ilaa iyo hadda
October 23, 2016 Puntland oo sheegtay in ciidamadooda ku dileen gobolka Mudug in ka badan 20 dagaalyahan oo Galmudug ah
Turkiga oo shaqada ka cayriyay 10,000 shaqaale dowli ah, xirayna xarumo warbaahineed